အိမ်သုံးပစ္စည်းများ - စတီးအသားကြိတ်စက် (ဓါးအပိုပါ) Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ classified: အသစ် စတီးအသားကြိတ်စက် (ဓါးအပိုပါ)
စတီးအသားကြိတ်စက် (ဓါးအပိုပါ) 🤩 အရမ်းမိုက်တယ်နော် 😱 ‌Price 17500 Ks စတီးပင်နံရံ ဆိုတော့ခိုင်ခန့်ပြီး ရေရှည်အတွက်စိတ်ချရပြီပေါ့နော် (1) အနှေး (2) အမြန် ချိန်သုံးလို့ရတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော် အိမ်ရှင်မများ မီးဖိုဆောင်မှာ အသားကြိတ်မလား? ပုဇွန်ခြောက်ကြိတ်မလား? ဂျင်းကြိတ်မလား? ငရုပ်သီးခြောက်ကြိတ်မလား? အနံ့သက်မကပ်ဘဲဆေးကြောရလွယ်ကူ ပေါ့ပါးသည့် စွယ်စုံကြိတ်စက်လေးပါ။ အသုံးပြုပုံ အိုးမရွေ့အောင် 1ရာဘာစီးကွင်းခံ၊ ဓားတပ်၊ မိမိကြိတ်လိုသည့်ပစ္စည်းထည့်၊ အဖုံးပိတ်၊ ပလပ်ထိုး၊ အဖုံးအပေါ်က ဖုလေးကိုဖိရုံဖြင့် မော်တာလည်ကြိတ်ပါသည်။ ကြိတ်ရတာမြန်ဆန်ပြီး Qualityကောင်းလို့ အိမ်ရှင်မများ နှစ်သက်သဘောကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင် 😍😍😘 📱09779975467 🏘️ရန်ကုန်အိမ်အရောက် ငွေချေပါ။ နယ်မှမှာယူသူများ ကားဂိတ်မှတစ်ဆင့်ပို့ပေးပါတယ်။ တန်ဆာခ ၀ယ်သူဘက်မှကျခံရပါတယ်။ ကားဂိတ်ပို့ခ 1500 ပါရှင့်🛒 🙏🙏၀ယ်ယူအားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့် 😍🙏🙏🙏